जसपा एकताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएकै हो त? « AayoMail
जसपा एकताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएकै हो त?
परमादेश शब्दको यत्रो ठूलो बेइज्जत?: रामनारायण बिडारी
उनले संसदमा दैनिक सर्वोच्चको परमादेशबारे उल्लेख गर्ने गरिएकोमा आपत्ति जनाए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेको आधिकारिकताको दाबीउपर प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा बनेको इजलासमा सुनुवाइ भइसकेको छ।
सुनुवाइपछि आयोगको इजलासले भनेअनुसार उपेन्द्र र महन्थ दुवै पक्षले निर्णयका सक्कल कागजातहरू मंगलबार बुझाइसकेका छन्। अब, दुवै पक्ष आयोगको निर्णय कुरेर बसिरहेका छन्।
बढीमा एक साताभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आयोगको निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेपछि जसपाभित्र विवाद चुलिएको थियो। र, महन्थहरू ओली सरकारमा सहभागी भएपछि फुटको संघारमा पुग्योे, जसपा।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले प्रतिगमन गरेकाले समर्थन वा सत्ता सहकार्य गर्न नहुने उपेन्द्र पक्षको अडान थियो। तर, महन्थ समूहले नमानेपछि एक अर्कालाई कारबाहीको चरण पार गर्दै जसपा अहिले आधिकारिकताको अन्तिम लडाइँमा छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टी एक ढिक्का भएर विपक्षी गठबन्धनमा उभिनुपर्ने उपेन्द्र समूहले चाहेको थियो। तर, महन्थ समूह ओलीतिर लागेपछि पार्टीमा चीरा पर्‍यो। र, निर्वाचन आयोगबाट विभाजनको अन्तिम निर्णय कुरेर बसिरहेको छ।
जेठ महिनादेखि विवाद सुरू भएयता एकता कायम राख्न दुवै पक्षबाट कुनै पहलसमेत छैन। त्यसले पनि जसपाभित्रको कलह चरम विन्दुमा पुगिसकेको प्रष्ट हुन्छ।
ओलीको पक्षमा लागेकै कारण विभाजनको डिलमा पुगिसकेको जसपाको महन्थ पक्षले आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत हाल्यो।
गठबन्धनमै रहेका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिनु स्वभाविकै थियो। तर, महन्थ पक्षले विश्वासको मत दिनु अनेपक्षीत र अप्रत्याशीत दुवै। यहाँसम्म कि देउवालाई विश्वासको मत दिनबारे पार्टीमा निर्णय नभएकाले कतिपय नेता नै आश्चर्यचकित परेका थिए।
उपेन्द्र समूहसँगै महन्थ पक्षका सांसदहरूले पनि देउवालाई दिएको विश्वासको मतले कलह अन्त्य गरेर जसपा एकता जोगाउने पहलको रूपमा अथ्र्याएका छन्, कतिपय नेताले।
महन्थपक्षीय प्रदेश २ का सांसद एवं कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमन देउवालाई एक ढिक्का भएर विश्वासको मत दिनुलाई सुझबुझपूर्ण निर्णय बताउँछन्।
दुवै पक्षले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टी एकीकरणको माहोल बनेको उनको भनाइ छ।
‘सबैजना सँगै गएर सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ त्यसले पार्टीभित्रको चीरालाई अन्त्य गरेको छ र पार्टी एकीकरणको फेरि एकपटक माहोल बनेको छ,’ आयोमेलसँग सुमनले भने।
देउवालाई विश्वासको मत नदिने कुनै कारण पनि नरहेको उनले बताए।
‘प्रतिनिधिसभामा पेश भएका १५ अध्यादेशमध्ये एउटा नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी पनि थियो। शेरबहादुरजीले आफैं पत्र पठाएर विश्वासको मत माग्नु भएको थियो,’ उनी भन्छन्,‘मत नदिने कुनै आधारै थिएन। विश्वास छैन भनेर कुनै आधार थिएन। तर, विश्वासको मत दिने दुईटा आधार बन्यो।’
उनले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनेको जिकिर गरेका छन्।
विश्वासको मत दिएपछि एकताको माहोल बनेको कार्यकारिणी सदस्य सुमनले बताइरहे पनि त्यसयता दुवै समूहमा छलफलसमेत भएको छैन।
केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विभाजित भइसकेको जसपाको एकता कायम रहने सम्भावना अन्त्य प्रायः भइसकेको कतिपय नेताहरूले बताउन थालेका छन्।
उपेन्द्रपक्षीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संघीय सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ एकताको च्याप्टर नै बन्द भइसकेको बताउँछन्। चरम सीमा नाघिसकेकोले एकताको चर्चासमेत हुन छोडिसकेको उनको भनाइ छ।
‘विवादले सीमा नाघिसकेको छ, पार्टीभित्र एकताको चर्चा हुन पनि छोडिसक्यो,’ उनले भने,‘एक हिसाबले अब त्यो च्याप्टर नै क्लोज भइसक्यो। अब आयोगले के निर्णय गर्छ। त्यसै हिसाबले अगाडि बढिन्छ।’
तर, महन्थपक्षीय संघीय सांसद उमांशकर अरगरिया पार्टीलाई विभाजनको बाटोमा लग्ने काम अर्को पक्षबाट भएको दाबी गर्छन्। विभाजनतर्फ डोर्‍याउने पक्ष सच्चिएर आए अझै एकताको सम्भावना कायम रहेको उनले बताए।
‘निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी उहाँहरूले गर्नु भएको हो। हामीले गरेका होइनौं,’ अरगरिया भन्छन्,‘आधिकारिकताको दाबी फिर्ता भए अझ पनि एकता हुनसक्छ।’
उनले संसदमा दैनिक सर्वोच्चको परमादेशबारे उल्लेख गर्ने गरिएकोमा आपत्ति जनाए। ‘परमादेश भन्ने शब्दको यत्रो ठूलो बेइज्जत, त्यो पनि राष्ट्रिय सभामा?